Ọkụ bamboo na -esite na iberibe osisi achara, egbute ya ma ọ dịkarịa ala afọ ise, ma kpọọ ya n'ọkụ na oke okpomọkụ sitere na 800 ruo 1200 Celsius. Ọ na -erite uru na nchekwa gburugburu ebe obibi site na ibelata ihe ndị na -emetọ emetọ.  Ọ bụ en ...
Usoro mmepụta unyi unyi
site na nchịkwa na 21-07-06
Ihicha Bamboo Ọ na -ewekarị ihe dị ka otu izu iji anwụrụ ọkụ na -esi n'ọkụ na -ere ọkụ iji kpoo ọkụ wee kpọọ nkụ. N'oge a, ọnọdụ okpomọkụ dị na ebe a na -ere unyi bụ ihe na -erughị 150 ℃, ọkachasị iji wepu mmiri dị na ngwo, ka ọdịdị na ...
Ngwa nke unyi unyi
1. Carbon maka nsacha mmiri: unyi nchara bamboo bụ onye na -ahụ maka nsacha mmiri na -arụ ọrụ nke ọma. Ọ nwere ike wepu kemịkal na -emerụ ahụ na ọla dị arọ nke fọdụrụ n'ime mmiri, wepụ isi na mmiri, wee wepụta elemen mara mma ...